झाँक्रीकाे पक्राउ बारे कसले के भने ?
नेकपाकाे प्रचण्ड-नेपाल पक्षकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेसँगै विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बाेलेकै आधारमा पक्राउ गर्न थाले जेल भरिने बताएका छन्। त्यस्तै, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नेत्री झाँक्रीलाई प्रधानमन्त्रीकाे ठाडाे निर्देशनमा पक्राउ गरिएकाे बताएका छन्। नेकपाकै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले फाँसीवादी तरिकाले झाँक्री पक्राउ परेकाे बताएका छन्। त्यस्तै, कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलले झाँक्रीकाे पक्राउले सरकारकाे अधिनायकत्व उदांगिएकाे बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको हो।
झाँक्री पक्राउविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको आक्रोश : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उड्यो
प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरियो : दाहाल
रामकुमारी पक्राउबारे सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् : सरकारले फाँसीवादी तरिका अपनाएको सन्देश दियो
झाँक्री पक्राउपछि भट्टराईले भने- सरकारको काल आएकै हो ?
कमल थापाको माग : रामकुमारी झाँक्रीलाई तत्काल रिहाइ गरियोस्
रामकुमारीको पक्राउले अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गियो : रामचन्द्र पौडेल
छोटकरी विशेष 8 घण्टा पहिले